Uyisebenzisa njani ithebhulethi yegraphic kwiPhotoshop: ezona tafile zibalaseleyo zoyilo | Abadali be-Intanethi
Uyisebenzisa njani ithebhulethi yegraphics kwiPhotoshop
UNerea Morcillo | 05/05/2022 16:00 | Izixhobo zoYilo, Photoshop
Umthombo: Uyilo loMzobo
Itekhnoloji ibonelele ngeendlela ezinkulu ukuba. Xa uthi krwada nje benza umsebenzi wabantu ube lula. Bayenza ibe mnandi ngakumbi kwaye ngaphezu kwayo yonke into, bagcina ixesha, nto leyo, kumyili, ixesha elibaluleke kakhulu.
Kodwa asifuni kuthetha nawe malunga nexesha, nangona iteknoloji inento yokwenza nalo mba. Sifuna ukuthetha nawe malunga nokuba kubaluleke kangakanani ukusetyenziswa kwethebhulethi yegraphics namhlanje. Ngoko, Siza kukubonisa indlela yokusebenzisa ithebhulethi yegraphics kwizicelo ezifana nePhotoshop. Isixhobo esifuna ithebhulethi elungileyo ukuze ikwazi ukusebenza ngemizobo okanye iivektha.
Siza kukubonisa ezinye zeempawu ezintle okanye iimodeli ukuze zibe luncedo olukhulu kuwe.
1 Ithebhulethi yegraphic: yintoni na
1.1 Iimpawu kunye nemisebenzi
2 Isifundo: Ukusebenzisa ithebhulethi yakho yemizobo kwiPhotoshop
2.1 Inyathelo 1: Iibrashi
2.2 Inyathelo lesi-2: Umzobo
2.3 Inyathelo lesi-3: Cima umzobo oyintloko
2.4 Inyathelo lesi-4: Gcwalisa umzobo wakho ngombala
3 Iitafile zegraphics ezilungileyo kakhulu
3.3 IWacom Cintiq Pro
Ithebhulethi yegraphic: yintoni na
Icwecwe lemizobo lichazwa njenge uhlobo lwesixhobo esibonakaliswa ikakhulu ngokuqhagamshelwa kwisixhobo esithile. Ngokuqhelekileyo, esi sixhobo sihlala sikhompyutheni kwaye senza oko ngentambo ye-USD okanye, ngakolunye uhlangothi, kukho abanye abanobuchwephesha obuphezulu obudibanisa nge-bluetooth uxhumano.
Bakwanalo nohlobo lwepensile yedijithali okanye usiba oludityanisiweyo, izinto ezimbini ezikuvumela ukuba uzobe ngokukhululekileyo nangokulula kwisikrini sethebhulethi yegraphic. Ngokubandakanya izinto zobugcisa ezibaluleke kakhulu kunye nomdla, ngaloo ndlela zivumela i-stroke ukuba ikhululeke kangangoko kunokwenzeka, simulating ngale ndlela, intshukumo manual ngepensile yemveli.
Iimpawu kunye nemisebenzi
Phakathi kwemisebenzi yayo, igqamile ukuba sisixhobo eso ikakhulu Yenzelwe ukuba ikwazi ukuzoba, ukubhala, ukuyila, ukupeyinta njl.. Yonke into esiqhele ukuyenza ngepensile kunye nephepha lephepha kodwa ngokwedijithali. Yinto eyadalwa kuluntu oluthile, olu luntu luphawulwa ngokuba; abayili, amagcisa, abayili bezakhiwo njl.njl. Ikwasetyenziswa nangabasebenzisi abasebenza kwimodeli ye-3D ngokunjalo.
Ngokuqhelekileyo zizinto ezingadingi iindleko ezigqithisileyo, nto leyo eyenze ukuba ibe ngumthombo obalulekileyo wokukwazi ukusebenza ngokukhululeka kwaye ube nayo ezandleni zakho. Kukho iimodeli ezininzi ezikhoyo, imodeli nganye iyilwe ngendlela eyahlukileyo, okwenza kube yindlela entsha yokusebenza ngeteknoloji entsha kunye nokuququzelela umsebenzi wakho kwinqanaba elikhulu.
Abasebenzisi abaninzi ngakumbi bakhetha ukusebenzisa olu hlobo loncedo kwiiprojekthi zabo, ukongeza, ababonisi abaninzi ukuzuza iziphumo ezintle ngokusebenzisa ezinye izicelo okanye izixhobo ezifana Illustrator. Ngamafutshane, eyona ndlela ilula yokusebenza.
Okulandelayo siza kukubonisa Isifundo esifutshane sendlela yokusebenzisa ithebhulethi yakho yemizobo kwizicelo ezinjengePhotoshop. Siyakhumbula kwakhona ukuba esi sixhobo sinikezelwe ekuthinteleni kwakhona imifanekiso, sisebenza ngolu hlobo ngemifanekiso kunye neepopayi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, unokufumana umbono omncinci wokuba ungakanani na onokusebenza ngesi sixhobo kunye neeprojekthi onokuthi uzenze ngokutyibilika isitayile kwiscreen sethebhulethi yegraphic. Ngokufutshane, sinethemba lokuba esi sifundo sincinci siza kuza siya kuba luncedo olukhulu kuwe.
Isifundo: Ukusebenzisa ithebhulethi yakho yemizobo kwiPhotoshop
Inyathelo 1: Iibrashi
Umthombo: Inkxaso ye-Adobe
Into yokuqala ekufuneka siyenze kwaye siyithathele ingqalelo ngaphambi kokuba sisebenze, kukulungelelanisa ngokuchanekileyo isixhobo sethu kunye nethebhulethi ukuze kungabikho mahluko xa usebenza. Ulungelelwaniso luxhomekeke kwinto yobuqu kakhulu, kuba isixhobo ngasinye kunye nethebhulethi ilinganiswe ngendlela eyahlukileyo kwaye iyahluka ngokwemodeli.
Nje ukuba silinganise ithebhulethi kunye nosiba, siyaqhubeka nokukubonisa inyathelo lokuqala ekufuneka uyazi, iibhrashi zePhotoshop. Usenokuba sele usazi okanye uyawuqonda umbandela ekuqaleni, kodwa kufuneka uwuthathele ingqalelo nakwithebhulethi yakho.
Ukwenza oku, siya kuvula uxwebhu olutsha, imvelaphi okanye itheyibhile yomsebenzi iya kuba mhlophe ngokupheleleyo, siya kuqhubeka nokucinezela ukhetho lweebrashi, kwaye siya kuqala ukudweba ngeyona nto ilula kakhulu esinayo.
Emva kokuba senze i-stroke yokuqala, kufuneka sithathele ingqalelo i-smooling, ukuze sikwazi ukuwaqwalasela ngokwepesenti esiyifunayo ngalomzuzu.
Nje ukuba sele sizivavanyile zonke iibrashi kwaye siyazi ukuba yeyiphi esinokuthi sisebenze ngayo, Siqhubeleka nokuqalisa ukuzoba.
Inyathelo lesi-2: Umzobo
Umzobo sesona sigaba sibalulekileyo kolu hambo, ngoko ke kufuneka sithathele ingqalelo indlela esifuna ukusebenza ngayo ngomgca, kunye nendlela esifuna ukusebenza ngayo.
Eyona ndlela ilula nekhawulezayo kukuqala ngomzobo wokuqala. Zoba kancinci umzobo omncinci, ukwenza oku, sebenzisa ibrashi entle kwaye wehlise i-opacity okanye ubunzulu, ukuze ukubetha kungabonakali kodwa unokusebenza ngokukhululeka kwangaxeshanye.
Xa sele sinomzobo, siya kusebenzisa ibrashi yesibini, ngeli xesha likhulu kwaye linamandla kwaye liqina ngakumbi. Kwaye ngaphezu kwemivumbo yomzobo wethu, siya kuqala ukulungisa imigca yokuqala engaqhelekanga, siya kugqibelelisa ezinye ii-engile, kwaye siya kunika umzobo wethu ubume obuyinyani ngakumbi.
Inyathelo lesi-3: Cima umzobo oyintloko
Nje ukuba sele sinemigangatho emibini ethe kratya, siya kususa umaleko wokuqala into esiyenzayo kwimivumbo yokuqala.
Ukwenza oku, siya kukhetha isixhobo sokucima kwibhokisi yesixhobo kwaye emva koko siya kusebenzisa uhlobo lwesicibi esityebileyo kakhulu, ngokwaneleyo ukuba sifumana umaleko omnye kuphela kunye nemivumbo yokuqala echanekileyo.
Sakuba sifumene eli nyathelo, siya kudlulela kwimibala.
Inyathelo lesi-4: Gcwalisa umzobo wakho ngombala
Kwiinki okanye imibala ilula kakhulu, kwanele ukuba icace malunga neeprofayili zemibala esiza kusebenza ngayo kwaye sizikhethe. Inxalenye enzima yale nkqubo kukukhetha ibhrashi echanekileyo oza kufakwa ngayo umbala kwistroke ngasinye, ekubeni istroke ngasinye sahlukile, esinye siya kuhlala sithe tye okanye sigobile kunomnye, ngoko kuya kufuneka sisebenzise iibhrashi ezahlukeneyo.
Nje ukuba sibe neebrashi ezikhethiweyo, siya kubabala umfanekiso wethu. Khumbula ukuba ungaphinda uqwalasele ubunzulu bombala, into enokuba nomdla ukuba ufuna ukwenza imixube okanye umahluko omkhulu.
Iitafile zegraphics ezilungileyo kakhulu
Yeyona tablet igqwesileyo yemizobo ukuba ufuna into esemgangathweni enexabiso elingekho phezulu kakhulu. Ibonakaliswa ngokuqulatha ubukhulu be-10 x 6,25 intshi, imilinganiselo eya kukuvumela ukuba usebenze ngaphandle kweengxaki.
Ukongeza, eyona nto ibonakalisa kakhulu esi sixhobo kukukhawuleza kwesenzo esinaso, unokuzoba ngoko nangoko istrowuku ngasinye osenzayo okanye isenzo osenzayo ngeyona ndlela izenzekelayo. Ngaphandle kwamathandabuzo lukhetho olugqibeleleyo ukuba ujonge iziphumo ezigqibeleleyo.
Yeyona tablet igqibeleleyo ukuba umtsha kwicandelo loyilo kwaye awuzange usebenze kunye ngaphambili. Kuya kukunceda ngamanyathelo akho okuqala kwaye nangendlela yobuchwephesha.
Enye inkcukacha ekufuneka igcinwe engqondweni kukuba yithebhulethi yegraphics ebuyiselwa umva, eyenza kube nzima ukusebenza nayo ukuba ushiywe okanye ushiywe.
Kwaye okokugqibela, ukuba awazi ukuba uqale njani okanye ngantoni, izicelo ezininzi zibandakanyiwe ngokungagqibekanga ukuze uzame kwaye uqale ukuzoba okanye ukuyila okokuqala.
IWacom Cintiq Pro
Yeyona tablet igqibeleleyo ukuba sele uyincutshe kuyilo kunye nokuphatha amacwecwe emizobo. Umgangatho wayo uyamangalisa, ixabiso liphezulu kunokuba limiselwe, kodwa kuyinto eqhelekileyo ukuthathela ingqalelo izinto eziyiqambayo.
Iqulethe i-stylus esebenza ngokupheleleyo ngaphandle kwebhetri, ikwaqulethe amaqhosha amaninzi onokuthi uwenze ngokwezifiso kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, inohlengahlengiso olufanelekileyo loxinzelelo kwaye lubonakaliswe kuyilo.
Ukuba sithetha ngescreen, kusishiya ngaphandle kwamathandabuzo ngemilomo yethu evulekileyo, ukusukela oko iqulethe umboniso we-4K ongakholelekiyo onokusebenza ngayo imizobo yakho ngendlela emangalisayo.
Yenye yeepilisi ezilungiselelwe abaqalayo boyilo. Uyilo lwayo olumangalisayo luyenza ibe yenye yezona tafile zibalaseleyo zemizobo kwimarike yonke. Ukongezelela, kufuneka kuqatshelwe ukuba iqulethe ixabiso eliphantsi apho, amathuba akho okuba ukwazi ukuyifumana lula kwaye ngokukhawuleza anda.
Idibanisa ngekhebula le-USB eliya ngqo kwisixhobo, likwabandakanya iinkcukacha ezahlukeneyo kunye nemiba efana ne-8 hotkeys kunye nepeni enebhetri eyaneleyo yokusebenza nayo.
Ithebhulethi yegraphic iyimfuneko ebomini bakho ukuba uzinikele kuyilo lwegraphic, nokuba ungumfoti okanye umfoti. Kuba awukwazi ukutyala ixesha kuphela kwezona projekthi zobugcisa, kodwa kwakhona, kuyenzeka ukuba uqinise icala lakho loyilo ngokuhlela imifanekiso, uhlengahlengiso lokukhanya kunye nokwahlukileyo, okanye unokwenza uninzi loyilo lwakho lokuhlela kunye nolwenkampani.
Ngaphandle kwamathandabuzo, indlela elungileyo yokukwazi ukusebenza oko, siyathemba ukuba ufunde eyona nto isisiseko sehlabathi seetafile zegraphic. Ngoku ntywila kwenye kwaye uqale ukuhambisa ipensile emva naphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Uyisebenzisa njani ithebhulethi yegraphics kwiPhotoshop